अचेल जब बाटामा, नदी किनारमा, घरगोठका छेउछाउमा प्रयोगपछि मिल्काइएका कन्डमहरू देख्छु, मलाई भन्न मन लाग्छ, ‘काली पातर, ती कन्डम मौन छन् । पटक्कै बोल्दैनन् ।’ गम्छु— यी बोलेको दिन पीँधको हिमाल पग्लिन्छ । फेरि गम्छु— कुन दिन पीँधको हिमाल पग्लिन्छ ? त्यही दिन, जुन दिन काली पातरहरू स्वयं सूर्य भएर हिमालयमा ओथारो बस्नेछन् ।
तर, सकस जिन्दगीको व्यथा लोकार्पण गर्नुअगावै उनी सदाका लागि गइन्, यो लालपुर्जाको दुनियाँलाई अलविदा भनेर । लालपुर्जाले बुनिदिएका सम्बन्धहरूलाई बिदा भनेर !
२०५९ सालमा म ‘निभा शाह’ नामबाट होइन, ‘अदिति शाह’ नाममा भारतको दिल्लीबाट सुपुर्दगी भएरर नेपालको जेलमा ल्याइएँ । त्यसको कारण थियो— तत्कालीन माओवादी पार्टीको क्याडर हुनु । त्यो पार्टी जो अचेल सत्तामा टाम लागेको भ्रष्टाचारी घोडो दौडाउँदै छ, जसले भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रूपमा संस्थागत गर्‍यो, जसलाई जनता ‘जोई पोइ कोही’ को पार्टी भन्छन् । जे होस्, म अहिले त्यता जान्नँ । लहरो ताने पहरो जाने हँसिया हथौडाको पर्दाभित्र लाल उपल्लाहरूका नाङ्गा नाच कति छन् कति ! मार्क्सले यिनका नाङ्गा नाच देखे भन्दा हुन्— लाल लाल ! नाङ्गा नाच, नाङ्गा नाच ! माओको बर्को ओढेर भ्रष्टाचार गर्ने जुडासहरूको नाङ्गा नाच, नाङ्गा नाच !
म जेलमा छँदा लक्ष्मी कार्की नामकीे एक बहिनीलाई भेटेकी थिएँ । उनलाई पितृसत्ताले मौन पागल बनाएको थियो । उनी कसैसँग बोल्दैनथिन् । बोल्थिन् त जेलका भित्तासँग मात्र ! भित्तासँगको उनको एकोहोरो संवाद बडो मनोवैज्ञानिक थियो । लक्ष्मी एक हातमा लट्ठी लिन्थिन् र जेलका भित्तालाई चुट्दै–थुक्दै भन्थिन्, ‘थुक्क बलात्कारी भित्ता, थुक्क !’ मैले उनको भित्ते–प्रतिरोध देखेपछि चौकीदार विष्णु दिदीलाई कारण सोधेकी थिएँ । विष्णु दिदीबाट लक्ष्मीको वृत्तान्त सुनेपछि म यति विचलित भएँ, लक्ष्मीले थुक्ने भित्तालाई थुकेर भनें, ‘थुक्क पितृसत्ता ! थुक्क !’
‘मंगलसेनको शाही सेनाले आतंककारी माओवादी भन्दै ब्यारेक लग्यो । रण्डी भन्दै बलात्कार गर्‍यो । कति जनाले बलात्कार गरे ? मुँ मूर्छा परिगञा । चेत नाइँ ! मलाई मरी भनेर बाटाँ छोडिदिए । मेरो ओखतोमूलो गरिदिने कोही नाइँ ! माओवादी पार्टीले मेरो दवाई गर्दैन, न घर जान दिन्छ । घरमा गए जगल्टा चुँडेर भाटकाट्या ल्याउँछ । बन्दी बनाउँछ । मेरो आङ (गर्भाशय) खसेको छ । मेरो हरमा (यौनाङ्ग) छाउ भए जस्तै चुहेको चुह्यै छ । हरमा घाउ छ । औषधि गरिदिने कोही छैन । काँ जाम् ? बाँचूँ नाइँ त बाँच्न गाह्रो छ । सारा शरीर घाउ दुखे जस्तै दुख्छ ।’ यी आर्तनाद हुन् रसिला ताम्राकारका । दलित समुदायकी उनी अछामबासी हुन् । जुन बेला शाही सेनाले बलात्कार गर्‍यो, उनी नाबालखै थिइन् ।
यो सन्दर्भमा, महिलामुक्तिलाई आफ्नै जीवनमा लागू गर्ने नृत्याङ्गना इजाडोरा डङ्कनको भनाइ सम्झना हुन्छ, ‘आशा सारै कठिन समयमा पनि बाँच्ने वृक्ष हो । यसका हाँगाबिँगा झर्छन्, सुक्छन्, मुर्झाउँछन्, तैपनि यो वृक्ष नयाँनयाँ रूपमा फेरि पलाउँछ ।’ हुन पनि हो, यसो नहुँदो हो त पितृसत्ताको साइनाइड खाएर पनि स्त्री कसरी बाँचिरहन्छे ? कसरी महिलामुक्तिका लागि आवाज उठाउँछे ? कसरी मनुष्यत्वका लागि ऊ लडिरहन्छे ? यो आशाको वृक्ष नहुँदो हो त न स्त्री रहन्थे, न सृष्टि रहन्थ्यो । न रसिला कम्युनिस्ट ट्रमा सेन्टरझित्र बाँचिरहन्थिन् !